Umhlobiso Wobuciko Wamagugu AseThekwini - Durban Local History Museums
By Durban Local History Museums6th July 2021Events
Kujwayelekile ukuthi kuthiwe iTheku linamaqoqo amaningi futhi amakhulu ezakhiwo zobuciko zomhlobiso emhlabeni jikelele, ngaphandle kwe-Miami, yona ke eyaziwa ngokuhamba phambili ngomuhlobiso. Ngeshwa ke, lokho akusilona iqiniso kodwa uma uzihambela nje edolobheni eThekwini uyabona ukuthi yingani abantu bacabange kanjalo. Singaziqhenya kakhulu ngobunye bobuhle nengcebo yezakhiwo zethu, noma kungesithina esibahola phambili ohlwini lobuhle nobuciko bezakhiwo zethu, kodwa ke sikhona ohlwini lwabahamba phambili ngezibonela zobuciko nokuhlobisa, kanti ke kuthiwa ithina kuphela esine sakhiwo emhlabeni jikelele esihlotshiswe ngezimpala ezimbili! *
Ekhasini elishicilelwe phambilini elibizwa nge “10 Cities Where Art Deco Architecture Reigns Supreme“, iTheku lihleli eduze nje nedolobha elibizwa ngokuthi i-Mumbai, okuyidolobha okuhlongozwa ukuthi Ilona dolobha elinezakhiwo zobuciko eziningi emhlabeni, ngenxa yenani lezakhiwo elinazo ngaphandle nje kwase-Miami.
Izakhiwo eziningi zobuciko zomhlobiso ezatholakala eThekwini zinde kakhulu kangangokuthi zingaqhathaniswa nalezi ezitholakala edolobheni iGothan City, kodwa ke sinezibonelo ezimbili ezitholakala endaweni yasedolobheni, abasekhaya abazibiza ngokuthi u ‘Grey Street’.
The 1930s Colonial Mutual Building on West Street (now Dr Pixley KaSeme St)
Abad Court & Essop Moosa Building, 125-131 Dr Goonam Street
Kungekudala nje i-Durban Art Deco Society ibisingethe ‘i-Talk & Walk’ endawenu ebibizwa ngokuthi u-Grey Street Area kepha manje esibizwa ngokusemthethweni nge-Dr Yusuf Dadoo Street. Ngokufanelekile loluhambo lusungulwe ngonyaka ka 1860 Heritage Centre emgwaqeni i-Derby Street. Abantu abaningi abebehweba kulendawo basukela enzalweni yabokufika abafike ngonyaka ka 1860, abaze eNingizimu Afrika ngesikhathi kuchuma kakhulu ukusebenza emasimi omoba. Loluhambo lokuvakasha luhlanganise nokuvakashela isikhumbuzo sika-Gandhi Memorial, manje esesiyingxenye yomlando yomgudu wokugcina amafa aseThekwini. Loluhamba nokubhungwa obekukhona bekubizwa ngokuthi i-‘Casbah Chic’, kanti beluholwa ngumbhali ophinde abe ngumakhi, uSolwazizi u-Franco Frescura. USolwazi u-Frescura usezibandakanye kakhulu ekwenzeni ucwaningo olunzulu ngezakhiwo ezitholakala ku-Grey Street area, kanti ke futhi waphinde waveza nolwazi olunzulu ngaleZI zakhiwo
* Lezimpala ziyabonakala kwisakhiwo i-Colonial Mutual Building, kanti ke sitholakala emgwaqeni u-Dr Pixley KaSeme Street. Lesi sakhiwo sinezitezi eziyishumi nanhlanu “fourteen storey skyscraper”, kanti ke sasungulwa yinkampani yase Austrilia, Elsworth, Hennessey & Hennessey ngonyaka ka 1931, kwakuyisona sakhiwo eside ukuzidlula zonke edolobheni kwaze kwaba unyaka ka 1939.
Izithombe ngabakwa www.kznia.org.za, grahamlesliemccallum.files.wordpress.com, amandladurban.org.za kanye www.durbandeco.org.za
1860 Heritage CentreAmaguguArt decoDr Goonam StreetGandhi MemorialGrey StreetUbuciko